Qaybta 1. Marka u baahan tahay inaad si uu u bedelo digitizer ku saabsan iPhone?
Dad badan leedahay 3GS ah iPhone, 4, 5 ama xataa iPhone dambayn 6 iyo sida qalab kale oo mobile kasta oo ay jiri karaan arrimo farsamo in si taxaddar leh hadlay mar ay dhacaan haddii aad rabto inaad sii wado isticmaalida qalab aad. Iyadoo iPhone waxaa jiri kara tiro balaadhan oo ah dhibaatooyin, laakiin mid ka mid ah arrinta ugu badan ee keeni kartaa madax xanuun waa marka ayna digitizer iPhone. Digitizer waa guddi galaas in si dhab ah daboolayaa LCD ee shaashadda iPhone ka, ka dhabayso signal digital in seenyaalaha analoogga ee si taleefanka si ay ula xiriiraan fikraddaada. Marka digitizer way xun ama aan shaqayn, tani dabcan keeni baahida loo qabo in aad si ay u tagaan jeebkaaga iyo lacag caddaan ah qaar ka mid ah ku qaataan haddii aad jeclaan lahayd inaad mar kale leeyihiin iPhone shaqeeya siman. Marka ayna digitizer ama aan shaqayn oo aad u badan tahay doono u baahan tahay inaad bedesho xaaladaha inta ugu badan, laakiin waxaa jira xaalado kale oo aad ku noqon karaan oo kaliya in nasiib yar iyo isticmaali karaan in ay qaataan tallaabooyin kale ee la xidhiidha in la diyaariyo ama lagu beddeli aad iPhone digitizer.
Xaaladaha halka aad u baahan tahay si ay ugu bedesho digitizer ah
• Waxaad ka heli jirin wax jawaab ka shaashadda marka aad isku daydo in ay ku Taabtaan
• qeybo ka mid ah shaashadda ka jawaabaan halka qaybaha kale ee aan samayn
• screen waa mid aad u adag tahay in la taabto marka aad isku daydo in ay maraan
Waxaad ka heli jirin wax jawaab ka shaashadda marka aad isku dayaan in ay ku Taabtaan
Marar badan isku dayi karto inaad taaban shaashadda iPhone oo kaliya in ay ogaadaan in aad helayso jawaab oo dhan; xitaa marka shaashadda si cad u arki karo iyo telefoonka waxaa ku shaqeeya on. Hadda waxaad ka heli doontaa in aad ku sugan tahay qayb ka ah dhibaatada la idin qalab. Ka dib markii isku dayaya reboot ama warshad keddibna ah iPhone, iyo inaad ku gaadhaan danihiina in aad weli ma iman jawaabo wax dhan ka shaashadda marka aad isku dayaan in ay ku Taabtaan, caddayn karo oo aad u badan in ay hadda tahay wakhtigii aad ka bedeli digitizer ee qalab iPhone aad si aad u hesho dib u shaqeynayo.
Qeybo ka mid ah shaashadda ka jawaabaan halka qaybaha kale ee aan samayn
Sabab kale oo sababta aad u baahan tahay in laguugu beddelo iPhone ee digitizer waa haddii qayb ka mid ah aad screen jawaab iyo qayb kale oo aanu ka jawaabin. Haddii aad haysato waxa aad u baahan tahay si ay ugu bedesho digitizer oo dhan, maxaa yeelay, mar qayb ka mid ah shaashadda u geysto waxaa suuro gal ah in sare inta kale ee digitizer ka joojin doonto ka shaqeeya meelaha qaar uun. Sidaas hore aad u bedelo, waa wax u wanaagsan oo aad loogu talagalay.
Screen waa mid aad u adag tahay in la taabto marka aad isku daydo in ay maraan
Weligaa ma taabtay qalab iPhone aad iyo aad u la yaab leh waxaa aanu ka jawaabin? Laakiin macsarada ku adag tahay in aad hesho jawaab ka dibna had iyo aad leedahay si aad u riixi aad u adag si ay u maraan ku dhawaad ​​qalabka? Tani waxay noqon kartaa mid niyad iyo diiqayo aad iyo farahaaga in, ka dibna laga yaabo in aad rabto in aad u rogrogmadaan aad iPhone iyada oo aad suuqa kala. Ha argagixin inkastoo maadaama ay tani waa dhibaato guud oo qalab badan oo mobile markii digitizer ay u baahan tahay in la bedelo. Marka aad bedeli digitizer aad ka dibna waxay leeyihiin doonaa iPhone shaqo mar kale.
Qaybta 2. Sidee laguugu beddelo iPhone ee digitizer
Hadda oo aad ogtahay marka aad u baahan tahay in laguugu beddelo digitizer iPhone ee, waxa la joogaa wakhtigii si ay u eegno talaabooyinka aad u baahan doontaa inaad raacdo si taxadar leh si aad u hesho digitizer ka bedelay. Waxaad ka iibsan kartaa digitizer internetka ama farsamo iPhone ama dukaan mobile kuu dhow marka aad ka warqabaa inay u baahan tahay in la bedelo. Waxaad dooran kartaa in laguugu beddelo digitizer by sameynayo naftaada xirmada qalabka la timid digitizer aad iibsatay ah. Ka hor inta bedelay aad iPhone ee digitizer, si loo hubiyo in aad ogtahay waxa aad samaynaysid, waayo, waxaa suuro gal ah in aad sare laga yaabaa in waxyeelo iPhone.
Waxyaabaha aad u baahan doontaa:
• digitizer iPhone, (waayo, aad iPhone - 3GS, 4, 5, 6)
• koobka nuugid
• kaashawiito Standard Phillips
• qalab Spudger
Dami aad iPhone oo markaas ka qaad lashu ku yaala dhinacyada qabo dareewalka fur Philips.
Waxa soo socda waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in meesha laga saaro shaashada waxyeeleeyeen isticmaalaya koobka nuugid in ay si taxadar leh u qaadan off. Dhig koobka nuugid shaashadda iyo Gaabinta isticmaali gacantaada soo horjeeda oo isku day in aad soo saarto shaashadda dhaawacan si taxadir. Sababta aad samaynayso waxa ay tahay inaad hesho in ay digitizer ah, laakiin inaad marka hore si ay u dabacsan. Waxaad kaloo isticmaali kartaa qalab mandiil jirridda si ay u caawiyaan in iska shaashadda oo caawin ka heli digitizer dabacsan.
Kadib markii uu dhamaystay talaabo 2, aad haatan Ogaan in ay jiraan wax badan oo fiilooyin ku sugan iPhone iyo xarkaha ku xiran yihiin motherboard ee iPhone oo loo baahan yahay in si taxadar leh ka go'ay guddiga. Isticmaal qalab spudger in ay si taxadar leh ay tan u sameeyaan. Waxaa muhiim ah in la xasuusto fiilooyin aad si sax ah ineysan. Marka guddiga waxaa ka go'ay aad hadda sii wadi karo in aan xoojinno 4.
In talaabo tan aad si taxadar leh uga saarto doonaa LCD ka digitizer hore iyo jirka iPhone. Hadda waxa aad ka dhigi doonaa inay digitizer cusub iyo in la hubiyo in dhammaan fiilooyin waxaa si fiican u xiran. Marka idinku sameeyey wadi karo in aan xoojinno 5.
Hadda oo aad si guul leh bedelay ayaa aad iPhone ee digitizer, waa wakhti ku haboon aad telefoon dib wada. Isticmaalka darawalka fur Philips si taxadar leh furka dib qalab wada halka in la hubiyo in qalabka si sax ah ugu xiran oo laga dareemayo deggan wadajir.
Kuwani waa tallaabooyinka aad qaadi karto haddii aad bartey waxyeelo aad iPhone ee digitizer. Fadlan hubi in aad ogtahay waxa aad samaynaysid ka hor inta aanad bilaabin bedelay aad iPhone ee digitizer.
> Resource > iPhone > iPhone Digitizer: Ma u baahan tahay si ay u bedesho?